FIZAHANTANY MAMOAFADY : Vao mainka nalentiky ny Kaonsily ilay vazaha nikasa hanolana zazavavy kely
Efa eny am-pelatanan’ny Fitsarana ny raharaha mahakasika ilay vazaha nikasa hametaveta zaza tao an-tampon-tanànan’Antsirabe. 9 mars 2018
Natolotra ny Fampanoavana, omaly alarobia 7 marsa tolakandro ilay vazaha raha toa ka saika niharan’ny fitsaram-bahoaka ny antoandron’ny talata 6 marsa lasa iny.
Raha tsiahivina kely ny zava-nitranga dia resaka hala-jaza no saika namonoan’ ny olona azy, saingy nandritra ny fanadihadiana natao dia fikasana hanolana indray no valiny. Raha ny tatitry ny Contrôleur général de Police, Ramilison Céléstin dia fantatra fa niaiky ity vazaha ity fa nisafosafo ireo zazavavy niisa roa.
Tamin’ny famotorana natao azy dia niaiky tanteraka ny tenany ary nilaza fa efa nikitika tokoa ny fivavian’ireo zazavavy izy. Izany indrindra no nampiantsoantso vonjy ireo ankizy ka noezahiny notambazany vola. Nolaviny kosa nefa ny filazana azy fa saika hangala-jaza, izay saika namonoan’ny olona azy moa izany. Soa ihany fa efa nidina ifotony ny mpitandro filaminana ka nalaky tony ny savorovoro. Voalaza ihany koa fa anisany nandetika azy ny Kaonsily Frantsay ao Antsirabe ka tsy ho afa-bela amin’ity tranga ity ny nahavanon-doza. Marihina moa fa efa 74 taona io vazaha lahy io ary nanomboka tamin’ny 3marsa lasa teo iny izy io no tonga nivahiny teto amintsika.
Voasokajy ho ao anatin’ny fizahan-tany mamoafady
Misy tokoa ny fizahantany mamoafady eto amintsika. Ezahina tsy hitombo sy hiroborobo hatrany izany raha ny voalazan’ny minisitry ny Fizahantany Roland Ratsiraka, izay ambentin-teniny matetika fataony. Raha ny zava-misy ankehitriny anefa dia toa mbola tsy voafoana hatramin’ny farany izany fa mbola misy sahy ihany ireo mpivahiny manararaotra, indrindra fa any amin’ny faritra amorontsiraka. Ny ady amin’izany no tokony hatao vaindohan-draharaha.
Efa misy ny fampirisihana ireo hotely sy mpandraharaha ara-pizahantany rehetra eto Madagasikara, izay karakarain’ny ny minisitera, mba hilaza aminy rehefa misy mpizaha tany tonga, ka hitan’izy ireo fa hafahafa fihetsika. Ohatra amin’izany ny fanodinkodinana sain’ny ankizy tsy ampy taona, fanambantambazana ankizy an-kolaka amin’ny vola sy ny fihetsika maro hafa. Mila manatona ny mpitandro filaminana sy mampilaza ny tompon’ andraikitra satria tsy azo ekena mihitsy ny zavatra mamoafady tahaka izany.
Tsara ho fantara ihany koa fa efa misy ny sampandraharaha misahana ny ady amin’ny fizahantany mamoafady sy ny fanararaotana ara-nofo mahazo ny zaza tsy ampy taona eto amintsika, ao anatin’izany ny ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for sexual Purposes). Izy ireo no anisany misahana ireo ankizy iharan’ny fanararaotana ara-nofo sy ny fanaovana tsindry hazo lena ny vehivavy.
Ny ray aman-dreny mihitsy matetika no voalaza fa “mivaro-janaka”
Tompon’andraikitra feno amin’ny fanafoanana ny fizahantany mamoafady ny Ray aman- dreny niteraka. Matetika mantsy raha ny zavatra hita dia ny ray sy reny niterka mihitsy no mandrisika ireo zanany hivarotena noho ny fitiavam- bola. Eo ihany koa ny faniriana sy ny finiavan’ny tovovavy Malagasy sasany hanambady vazaha, ka hatramin’ny zaza tsy ampy taona no efa manana ilay faniriana. Mazana anefa dia toa lasa anaovan’ireo vahiny filan-dratsiny fotsiny ireo ankizy ka simba dieny mbola kely ny ho aviny iray manontolo.
Tsy vao izao no nisy izay tranga izay fa efa an-taonany maro ka mila ny fandavan-tenan’ny tsirairay. Isan’ny andraikitra goavana ho fampandrosoana ny Firenena ny fiarahana misalahy miady amin’ny herisetra, ka tokony samy hahatsapa ny anjara tandrify azy ny tsirairay.